မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း ( ပြခန်းအမှတ် နှစ် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း ( ပြခန်းအမှတ် နှစ် )
မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း ( ပြခန်းအမှတ် နှစ် )
Posted by alinsett on Jun 3, 2013 in Arts & Humanities, Best Web Awards, Creative Writing, Drama, Essays.., Poetry | 89 comments
ကဗျာပြခန်း အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့စကား
ကဗျာချစ်သူများ ၏ ကဗျာပြခန်းမှ နွေးထွေးစွာ.. ကြိုဆိုပါသည် ။
ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်)ကိုတော့ အောင်မြင်ခမ်းနားစွာ ဖွင့်လှစ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါပြီ ။
ဒုတိယပြခန်းကို ဘယ်လို ထူးခြားအောင် ဖန်တီးပြကြမလဲလို့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ…….
ကျွန်တော့် Mail ထဲကို ခြိမ်းခြောက်စာကြီး တစ်စောင် ရောက်လာပါတယ်။
ဒီ ရွာထဲက.. နာမည်ကြီး ရွာသားကြီးတစ်ယောက် ပို့ လိုက်တဲ့ ခြိမ်းခြောက်စာ ပါ။
စာထဲမှာ ကဗျာတစ်ပုဒ်လည်း ပါ ပါတယ်။
အဲဒီကဗျာ ကို ပြခန်းထဲမှာ ထည့် ပါ..တဲ့ ။ မထည့်လို့ ကတော့ … သူ့ အဆိုးးမဆိုနဲ့ လို့ ကြိမ်းဝါး ထားလို့ကျွန်တော်တို့အိုးနင်းခွက်နင်း ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ကြောက်လန့် ပြီးး သူ့ ကဗျာ ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ . . .
အားလုံးးး …. ဟာခနဲ …. ဟင်ခနဲ ဖြစ် သွားရပါ တယ်။
သူ ရဲ့ကဗျာ…. ဆိုတာကြီးက အံ့သြစရာ ကြီးပါ။
အံ့သြစရာ ရွာသားကြီး တစ်ယောက်က….
အံ့သြစရာ ခြိမ်းခြောက်စာနဲ့အတူ ပေးပို့ လိုက်တဲ့…..
အံ့သြစရာ ကဗျာ ။
အဲဒီကဗျာကြီးး…. ပြခန်း အမှတ်နှစ်မှာ ထည့်ပြမှာလာာား ?????
ကဲ အဲဒီ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ကဗျာကြီး ပြခန်းထဲမှာ ရှိနေသလားး?
တခြားး ဘယ်လို ထုးခြားတဲ့ကဗျာတွေ ရော ပြထားသေးလဲ. .?
ဘယ်လို ထူးခြားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပြသ ထားသလဲ ?
ဒါတွေ သိ/ မြင် / ခံစား ချင်နေပြီ ဆိုရင်တော့. . . .
လာ ။ ကျွန်တော်နဲ့ အတူ ပြခန်း အမှတ် နှစ်ထဲ ဝင်ကြည့်ရအောင်။
ကဗျာ ချစ်သူများရဲ့ကဗျာပြခန်း အမှတ်နှစ် က ဖွင့်လိုက်ပါပြီ တဲ့ …။
အခု ကျွန်တော်က အဲဒီပြခန်းထဲ လိုက်ပို့ ဖို့တာဝန်ကျတယ်လေ ။
လာ. . . ကျွန်တော် … လိုက်ပို့ မယ်။
ကဗျာပြခန်းဆီ သွားမယ် ။
ဘယ်သူလိုက်မလဲ လို့ မမေးတော့ဘူးနော်။
အားလုံးက လိုက်ချင်နေတယ်ဆိုတာ သိပြီး သားပဲ ။
ဘယ်သူတွေကို လိုက်စေချင်တာလဲ လို့ လည်းး မမေးနဲ့ ဦးဗျ ။
ဟောဒီ ဂဇက်ရွာကြီးထဲက ရှိ ရှိသမျှ ရွာသူား အားလုံးရော / ဂဇက် စာဖတ်သူတွေ အားလုံးကိုပါ လိုက်စေချင်တာပါ။
ဟောဒီ ရွာသူား အားလုံးကလည်း ကဗျာကို ချစ်တဲ့ ကဗျာချစ်တဲ့…
ကဗျာချစ်သူတွေ ချည်းပဲ မဟုတ်လား။
ကဗျာနဲ့ဝေးပါတယ်ဆိုတဲ့ သူကတောင် ကဗျာပြခန်းကို ခံစားပေးဖို့ / အားပေးပြီး လက်ခုပ်တီး သြဘာပေးဖို့စိတ်အား ထက်သန်နေတာ ကျွန်တော် သိတယ်လေ။
ဒါကြောင့် ပြခန်း အမှတ်နှစ် ဖွင့်ပြီ ။
လာ . . ။
အဲ အဲ . . . . ပြခန်းအမှတ်နှစ် ဖွင့်နေပြီဆိုတာကို မသ်ိသေးတဲ့ ရွာသူားတွေကိုလည်းး အချင်းချင်း လက်တို့ ပြောပေးကြပါဦးဗျ ။
ပြခန်း အမှတ်နှစ် ဖွင့်နေပါပြီ လို့ ။
ပြီးတော့ အလင်းဆက် ဆိုတဲ့ကဗျာရူးစာရူးလေး ရေးထားတဲ့ ….. ဟောဒီ စာပိုဒ်ကလေးကိုပါ ရွတ်ပြ လိုက်ကြပါဦး။
အစဉ်အလာ ကြီးသော ကဗျာ။
လူသား၏ ခံစားတတ်သော နှလုံးသားဆီမှ …. ပေါက်ဖွားလာသော . ..အနုပညာ . . … .ကဗျာ။
အနုပညာကိုချစ်သည့် ….. လူသားတို့ဖန်တီး သော ……….. အနုပညာ . . . … ကဗျာ။
အခြားတန်ဖိုးများနှင့် မတူ . . .သီးခြားတန်ဖိုးဖြင့် ရပ်တည်နေသော …….အနုပညာ … . . . ကဗျာ ။
ပကတိတန်ဖို့းဖြင့်သာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ကမ္ဘာတည်ခဲ့သော…… …….. အနုပညာ…. . . ကဗျာ ။
ခံစားသူကို ကြည်နူးမှု အရှိန် အဟုန်ဖြင့် နှစ်သက်မြတ်နိုးစေတတ်သော…….. ရတနာ. . . .ကဗျာ ။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ရင်နင့်သည်းချာ……. ရွှေရင်လွှာကြားက… ခံစားရာ… ….ကဗျာ ။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်….. ကောင်းကင် ရင်ခွင် ဆီ က….. မြတ်နိုးဖွယ်ရာ…….. ကဗျာ ။
အို …… ကဗျာ ။
ကျွန်တော်တို့ချစ်ရပါသောကဗျာ ။
မေခနှင့် မလိခ ဆုံသလို ဂဇက်နှင့် ကဗျာ ဆုံခဲ့ပြီ ။
ကဗျာသည် ဂဇက် ရွာသူားတို့ ၏ နှလုံးသားထဲသို့့ ……. ဧရာဝတီ လို စီးဆင်းခဲ့ပြီ။
ဧရာဝတီကို ချစ်ကြသလို …… ကဗျာကိုလည်း …. ဤရွာက ချစ်မြတ် တွယ်တာ တတ်လေပြီ ။
ကဗျာကို …. ကဗျာ ဆန်ဆန် ချစ်ကြသော ဂဇက် ရွာသူ ရွာသားတို့ ရေ. . . ။
လာ ကဗျာပြခန်းကို သွားကြစို့ ။
ကဗျာ ပြခန်းထဲ ဝင်ဖို့ ရာ ….. ဝင်ကြေးမလိုပါ ။
ဦးထုပ်ချွတ်စရာ …. မလို ။
ဖိနပ်လည်း ချွတ်စရာ…. မလို ။
ကဗျာပြခန်းထဲ ဝင်ဖို့ ရာ တစ်ခုပဲ လိုပါတယ် ။
အနုပညာက ပေးမယ့် ရသကို ခံစားဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ နှလုံးသားးး။
ကဗျာကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့နှလုံးသား ပေါ့။
အဲဒါလေး တစ်ခုပဲ လိုပါတယ်။
ဟော ဟော ပြောရင်း ဆိုရင်းနဲ့ ကဗျာ ပြခန်းကိုရောက်ပါပြီ ။
လာကြ လာကြ ..။
ရွာသူားတို့ ရေ . . . . ပြခန်းထဲ ဝင်ရအောင် ။
အဲ နေဦးးးး ပြခန်းတံခါးဝမှာ စာရွက်တစ်ရွက် ကပ်ထားပါလားးး ။
ဘာ စာများလဲ ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးးး ။
ရတုမှာမူ စစ်ချီပုံအကြောင်း၊ ဘုရားတိုင်ခြင်းအကြောင်း၊ ရာသီဥတု တောတောင်ရေမြေ ကျေးငှက်အကြောင်း စသည်တို့ကို အခြေပြုလျက် နန်းတွင်းသူ နန်းတွင်းသား မောင်မယ်တို့၏ အချစ်ကိစ္စကို ဦးစားပေးဖွဲ့ဆိုသော ကဗျာဖြစ်သည်။ ဤရတုများသည် နောင်ဖြစ်ပေါ်လတ္တံ့သော ကဗျာများအတွက် စံပြုလောက်သော ကဗျာများဖြစ်ပေသည်။
တောင်ငူခေတ်ပြီးနောက် ညောင်ရမ်းခေတ် (၁၅၇၈ – ၁၇၉၇) ခေါ် ဒုတိယအင်းဝခေတ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုခေတ်တွင် စာဆိုများသည် အိုင်ချင်းများကို ဦးစားပေးဖွဲ့ဆိုကြသည်။ အိုင်ချင်းအများစုမှာ ချစ်သူအတွက် ကျေးတောသူများ လွမ်းဆွတ်ပုံ၊ ပူဆွေးပုံ၊ စိုးရိမ်ပုံ ဖွဲ့ဆိုထားသော တေးကဗျာများ ဖြစ်သည်။
ထိုအိုင်ချင်းကဗျာများအပြင် ၀န်ကြီးပဒေသရာဇာ၏ တျာချင်းများလည်း ပေါ်ထွန်းသည်။ ၀န်ကြီးပဒေသရာဇာ၏ တျာချင်းများသည် ပဒေသရာဇ်ခေတ် သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်အောက်ရှိ ပစ္စည်းမဲ့ အာဏာမဲ့များဖြစ်သော လယ်သမား၊ ထန်းတက်သမား၊ ပိန်းကောလှေသမား၊ နွားဝန်တင်သမား၊ အညာလှေကြီးသမားတို့၏ ဘ၀ကို ရေးဖွဲ့ထားသည် ကဗျာများဖြစ်ရာ ပြည်သူ့ကဗျာဟူ၍ပင် ခေါ်ဆိုကြသည်။
ထို့နောက် ကုန်းဘောင်ခေတ် (၁၇၅၂ – ၁၈၈၅) သို့ ရောက်လာသောအခါ မြန်မာကဗျာများသည် အင်နှင့်အားနှင့်ချီ၍ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြန်သည်။ ထိုခေတ်စာဆိုများသည် ပျို့၊ မော်ကွန်း၊ ဧချင်း၊ ရတု၊ ရကန် စသည့် ကဗျာရှည်များကိုလည်း ဖွဲ့ဆိုကြသည်။ တေးထပ်၊ လေးဆစ်၊ သဖြန်၊ လေးချိုး၊ လွမ်းချင်း စသည့် တေးကဗျာတိုများကိုလည်း ဖွဲ့ဆိုကြသည်။ ထိုထို ကဗျာများသည် များသောအားဖြင့် ဘုန်းတော်ဘွဲ့၊ ရာသီဘွဲ့၊ ပန်းဘွဲ့၊ တောဘွဲ့၊ တောင်ဘွဲ့၊ မယ်မောင်အချစ်ဘွဲ့၊ သံဝေဂဘွဲ့ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထိုထိုကဗျာများအပြင် ကောက်စိုက်တေး၊ မောင်းထောင်းတေး၊ ဗုံကြီးသံ စသည့် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် လယ်သမားဆိုင်ရာ ကဗျာများလည်း ပေါ်ထွန်းလာကြသည်။
ကုန်းဘောင်ခေတ်ကုန်ပြီးသည့်နောက် ကိုလိုနီခေတ် (၁၈၈၆ – ၁၉၄၂) သို့ ရောက်သောအခါ မြန်မာစာပေသည် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာ့ပညာရပ်များနှင့်အတူ အခိုက်အတန့် မှေးမှိန်ညှိုးနွမ်းခဲ့ရလေသည်။ သို့ရာတွင် မှေးမှိန်ညှိုးနွမ်းနေသော မြန်မာစာပေသည် ပုံနှိပ်စက်များခေတ်စား၍ စာအုပ်စာတန်းအများအပြား ထုတ်ဝေလာသဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၀ံသာနုစိတ်ဓာတ် တက်ကြွလာသဖြင့်လည်းကောင်း ပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာခဲ့ပြန်သည်။
အော် . . . . ဘာစာ များလဲ လို့ ။
လက်စသတ်တော့ ကဗျာပြခန်းအမှတ်တစ်မှာ ဦးမာဃ ရွတ်ပြဖို့ ကျန်သွားတဲ့….
( ( ဆရာ မြဇင်ရဲ့ ခေတ်ပေါ် အင်္ဂလိပ် + မြန်မာ (မြန်မာကဗျာ) စာအုပ်မှာ ပါရှိတဲ့ မြ၀တီပုံနှိပ်တိုက် အယ်ဒီတာချုပ်၏ အမှာစာကို ကိုးကားထားတဲ့ ) )
မြန်မာကဗျာ သမိုင်းကြောင်း အဆက်ကလေးကိုး။
အင်းးးး အူးမာဂတစ်ယောက် အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ လာကပ်သွားတာပဲ ဖြစ်မယ်။
(အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်မှာပေါ့။ သူက သိကြားမင်းကိုးးဗျ ။ နတ်သမီးတွေ က တစ်ဖက်ငါးရာမက….. နည်းနည်းနောနော မှ မ ဟုတ်တာ ။ )
ကျန်သေးတဲ့ ကဗျာ သမိုင်းကြောင်း က … ပြခန်း အမှတ်သုံး မှာမှ ဆက်လက် ဖော်ပြမယ်…ပေါ့လေ ။
ကဲ ကဲ… ။ ပြခန်းတံခါးဝမှာ ကပ်ထားတဲ့ကဗျာသမိုင်းကြောင်း အဆက်ကလေးလည်း…..ဖတ်ပြီးပြီ ဆိုတော့…..
ဝင်လို့ ရပါပြီ ခင်ဗျာ ။
ပြခန်းတံခါးကို လက်ညိုးကလေးနဲ့ ဒေါက် ခနဲ ခေါက်လိုက်တာနဲ့ခမ်းနားတဲ့ပြခန်းကြီးထဲ ရောက်ပါပြီ ။
ဂဇက်ရွာ သမိုင်းကြောင်းကို ယဉ်ကျေးမှုလိုင်းကောင်းထဲ ဝင်စေမယ့် ဟောဒီ ကဗျာပြခန်းထဲမှာ …. မွေ့လျော် ပျော်ရွှင်လှည့်ပါ။
ကျွန်တော် အလင်းဆက်ကတော့ ………….
ဒီ ပြခန်းတံခါးဝမှာ စောင့်ကြည့်နေမှာပါ။
ဒီပြခန်းထဲ ဘယ်သူတွေ လာတယ် ။
ဘယ်သူတွေ မလာဘူး ဆိုတာကို စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်နေပါတယ်နော့။
( မလာတဲ့ လူတွေကို သိကြားမင်းနဲ့ တိုင်ပြောမယ်။ )
ဒီ ပုံလေးကို ဒေါက်ခနဲ တစ်ချက် ခေါက်ပြီး..၀င်ပါနော့်
ဗုတ် လုပ်တဲ့လူက အိပ်ပျော်နေလို့ နည်းနည်း နောက်ကျသွားပါတယ်။ အဲ့ဒါလေး ခွေးလွှတ်ပေးကြပါနော်။
အောက်မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကဗျာတွေကို ဗုတ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။
ဒီတစ်ခါ ဗုတ်ရင် မှတ်ထားရမှာက …. တစ်ခါတည်း ကဗျာ သုံးပုဒ်ကို ခေါက်ကလေး ပြိုင်တူခြစ်ပြီး ဗုတ်လုပ်လို့ ရပါတယ်။
ကိုယ်က နှစ်ခုပဲ ကြိုက်ရင် နှစ်ခုပဲ ချစ် .. အဲ .. ခြစ် ..။ ၁ ခုပဲ ကြိုက်ရင် တစ်ခုထဲ ခြစ်ပြီး ဗုတ်ပေါ့နော်။
ဒီ ပြခန်း အမှတ် နှစ် ) ထဲမှာ.. အစီအရီ ချိတ်ဆွဲ ပြသထားတဲ့ ကဗျာများကို..
ရေးကြသူ ဆရာ /ဆရာမ များကတော့….
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း = ကဗျာ အမည် = ရွှေလရောင်
ရင်ကွဲသူ = ရွှေကြည်
အငယ်အနှောင်းမြို့ = ကမ်းဝေး
မှုန်ရီဝေေ၀ မန္တလေး =ကိုပေါက်( မန္တလေး)
လဗျာကဗြွတ် = ဦးကြောင်ကြီး
အမျှ …အမျှ … =ရာမည
“ရွှေသည်ငါနဲ့ မထိုက်လေပြီ။´ ´ = ခင်ခ
ချစ်ခြင်းကဗျာ.. = ကိုရင်စည်
အိမ်လွမ်းသူ =BMTM Mdy
အရိပ်မဲ့ခြေရာများ = ပိတောက်မိုး
အဝေးးး အဝေးကြီးပဲ =Nora
ဆက်လက်စီးဆင်းနေပေးပါ…. = နေခြည်
သူ = ရေပုလင်း
ကဗျာပြခန်း အမှတ်နှစ် ထဲက ကဗျာအလှတွေ / အနုပညာ ရသ အစုံစုံတွေကို … ခံစားပြီးပြီ ဆိုရင်တော့……
ကဗျာပြခန်း အမှတ် သုံးကို ဘယ်သူက ဘယ်လို တင်ပြဦးမလဲ လို့ ရင်ခုန်ကြည့်ပါဦး။
ဘယ် ကဗျာချစ်သူက တင်ပြမလဲ ဆိုတော့ ….
ကျွန်တော် . . . . .
ဘယ်သူက ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ တင်ပြလာဦးမလဲ ဆိုတာတော့…… . . ………
ကဗျာချစ်သူများ ရဲ့ ကဗျာပြခန်း ( အမှတ် သုံး ) ကို…….. မျှော် ။
ကဗျာပြခန်းအတွက်.. ကဗျာများပေးပို့လိုလျှင် alinsett.art@gmail.com သို့ပေးပို့နုိင်ပါကြောင်းးးး။
3 .6 . 2013 .
ဒါကတော့ သတင်းပေးချက်ကလေးပါ ။
ကဗျာပြခန်း အမှတ် ( ၃ ) ကို ဒီလ ၁၅ ရက်နေ့ လောက်မှာ
တင်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ် လိ့ု့ ကြိုတင် သတင်းပေးပါရစေ။
ပြီးတော့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ရွာထဲတင်လာသမျှ ကဗျာတော်တော်များများက
poetry ဆိုတဲ့ Category အောက် ရောက်နေပါပြီ ။
ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုပါရစေ ။
အခုဆိုရင် ကဗျာပြခန်း အတွက် ကဗျာ ကူညီပံ့ပိုးပေးပို့ သူတွေများတာကြောင့်…
မူလက ရည်ရွယ်ထားသလို ရွာထဲမှာတင်သမျှ ကဗျာတွေကို စုစည်းပြသ မယ့် အစီအစဉ် ထက် ကဗျာသစ်ကလေးတွေနဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပြခန်း အဖြစ်ကို ပဲ
အရင်ဖန်တီး ဖြစ်နေပါတယ်လို့ အသိပေးပါရစေ။
ဂဇက်မှာ တင်ပြထားပြီးသား ကဗျာ ဟောင်းတွေထဲကလည်း အလျဉ်းသင့်ရာ
ကဗျာလေးတွေကို ကြားညှပ် ဖော်ပြနေမယ့်အကြောင်းလည်း ပြောပါရစေ ။
ပြခန်းအတွက် ပေးပို့ လာတဲ့ကဗျာအပုဒ်ရေနဲ့
ပြခန်း…. တစ်ခန်းတစ်ခန်းမှာ ပြသနိုင်တဲ့အပုဒ်ရေ ကိုချိန် ညှိရတဲ့အတွက်
ကဗျာ အပါ နောက်ကျခဲ့ရင် နားလည်ပေးပါလို့လည်း တောင်းပန်ပါရစေ။
ပြခန်း အမှတ် ၃ အထိက ကဗျာများပြည့်သွား ပြီမို့ 
အခုက စ ပို့ ရင်……..
ပြခန်းအမှတ် ၄ ( သို့မဟုတ် ) ၅ မှ သာ ပါနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်း သံချောင်းခေါက်ပါရစေ။
ကဗျာရေးသော ဆရာ/ဆရာမများကလည်းကဗျာပြခန်း ရေ ရှည်
ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ကဗျာများ ဆက်လက် ကူညီပံ့ပိုးပေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။
ရွာ့ လူကြီးသူမ များဆီက..
အမှတ်တရ ကဗျာ လက်ဆောင် လေးများ…လိုချင်မက်မော မိပါကြောင်းးးးးး
မနှေးအမြန်…
ကျွန်တော်တို့ .. က.. အခြား ကဗျာဆရာကြီးတွေ ရဲ့ကဗျာနဲ့ချိန်းလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။
ကဗျာပြခန်းမှာ… ပြနေတဲ့ ကဗျာ / ရေးသူတွေထဲမှာ…
ပြခန်း တာဝန်ခံလေးတွေ ရဲ့ ကဗျာတချို့ ပါတတ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ က.. အဲဒီ ပြခန်းတာဝန်ခံတွေ ရေး တဲ့ ကဗျာတွေကို..
လိုရင် ဖြည့် / ပိုရင် လျှော့ ဖို့ .. ဆိုပြီး..
အရန် ကဗျာ အဖြစ်နဲ့ … လောလောဆယ် သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ် ။
လေးခ ကဗျာက အချိန်ကာလ ပေါ်မှာ.မူတည်တဲ့ကဗျာလေးတွေဆိုတော့..
ဒီ လ ….
ပါမှ ဖြစ်မှာလို့ ကျွန်တော်တို့ ..ဆုံးဖြတ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့်.. ပြခန်းအမှတ် ( ၃ ) မှာ.. စာရင်းဝင်ထားတဲ့…..
လေးခ ကဗျာနဲ့လဲ လိုက်ပါတယ် ။
လဲ ပြီးချန်ထားခဲ့တဲ့.. ကဗျာ ကို ပြခန်း( ၄ ) မှာ..ဖော်ပြမှာမို့ …
အခက်အခဲ.. တစ်စုံတစ်ရာ မရှိတော့ပါဘူး ။
ဆက်လက် ပံ့ပိုးပေးပါလို့ …။
လေး ခ ကဗျာများကို..မျှော်လျက်….
ကဗျာတွေကို ပုံနောက်ခံနဲ့သပ်သပ် ၊ စာသားချည်းသပ်သပ် ခွဲလုပ်ပေးထားတာ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။
ကျုပ်က အခုတော့ ကဗျာရေးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး…
ငယ်ငယ်က ရေးထားတာကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ မောင်ရင်တို့ သဘော….
ငယ်မူ ငယ်သွေး လက် ရာ
ကဗျာ လေးဆိုတော့လည်း တမျိုး ဆန်းတာပေါ့
လဗြွတ်ဆိုတာ အထီးတွေ မျိုးမသုန်းသမျှ ကမ္ဘာတည်သ၍ ရှိနေမှာမို့ ကဗျာပြခန်းတိုင်းမှာ ထည့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ.. အဲလိုမှ လုပ်မပေးနိုင်ရင် ပြခန်းတာဝန်ရှိသူများ ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ် ဖြတ်ပစ်ကြပါလို့….
ပဂိုးဒါး။ အလက်ဆင်းရေ။ နောက်ပြခန်းကျတော့ အဲဒီကဗျာ မတင်ပဲ အဲဒီလူဂျီးရဲ့ ခြိမ်းခြောက်စာတင်အေ။
ညီလေး အလင်းဆက် ရေ…။
အဲဒီလင့်မှာတင်ထားတဲ့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးအတွက် ကော်လီနာရဲ့ အနီကတ် ဆိုတဲ့
ကဗျာရေးခဲ့တဲ့ ဘလက်ချော ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုတောင်
အဲဒီကဗျာလေး ကို ညီလေးတို့ရဲ့ ကဗျာပြခန်း အမှတ် ၃ မှာ
ထည့်ပေးလို့ ရမလား ဟင်င်င်…။
အန်တီ သဲ ရေ
အူးကြောင် ရဲ့ခြိမ်းခြောက်စာ တွေ က တစ်စောင်ထက် တစ်စောင်
ပို ကြောက်စရာ ကောင်း လာတယ်နော်
သားမှား ပြီးးးးးးးးး မှား ပြီ အ မေ ရဲ့ 
လေး ဘလက် ရေ
ကဗျာ လေး ပေးလို့ ဝမ်းသာာပါတယ်
ကျေးဇးးလည်း တင်ပါတယ် ။
လေး ဘလက် ရဲ့ ကဗျာလေးကို
ပြခန်းဘအမှတ် ၃ သို့ မဟုတ် ၄ မှာ ထည့်သွင်းပြသ ပေါး့မယ်ဗျ
ကဲ ကဗျာချစ်သူ တို့ ရေ
အကြိုက်ဆုံး ကဗျာ ကို ဗုတ် လို့ ရပါပြီ လို့ 
အရောက်လာ တယ် ဆိုတော့
“သူ ”ဆိုတဲ့ကဗျာလေး ဗုတ်လိုက်ပြီနော်။
ဒီဇိုင်းကကျတော့ “ ရွှေသည်ငါနဲ့ မထိုက်လေပြီ ” ဒီဇိုင်းက တကယ်ပီတယ်။
အဲ့ ဒီဇိုင်း ဘယ်သူလုပ်တာလဲမသိဘူး
ဒီဇိုင်း လုပ်ပေးရတဲ့ ကဗျာ တာဝန် ခံလေးတော့
ပီတိဖြစ်နေ လောက်ပြီ ။
ဆိုတဲ့ ကဗျာတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ်..
တိမီးက ရွာထဲ သိပ်မရောက်ဖြစ်တော့ ဘယ်တူတွေ ရေးတာမှန်းလည်း သိဘူးရယ်….
ပုံလေးတွေ ဆိုတော့ ပိုလည်း အသက်ဝင်သွားရော့….
အဲဒိ ကဗျာ လေးတွေ ကို ဘယ်သူ တွေ ရေး တာလဲ ဆိုတော့
ပြခန်းလေးထဲ အ ရောက်လာပြီးး
ခံစား / အားပေး လို့ ကျေးဇူးပါ အရိပ် ရေ
ကဗျာရောက် မရောက် သိချင် ပါ တယ်
သုံး မသုံး လည်း သိချင်ပါတယ်
လို အပ် တာ ရှိ ရင် ပြော ပြ ပါအုံး
ပြ ခန်းထဲဝင်ကြည့် မှ ကျွန်တော် က ၀ လုံးတန်းပဲရှိ မှန်းသိတာ………။
ကဗျာလေးရောက်ရှိကြောင်းပါ ။ အိမ်ကြူး ရေ… ။
နောက်ထပ်လည်းကဗျာလေးတွေ ပေးပို့ စေချင်ပါကြောင်း။
ရောက်ရှိလာတဲ့ကဗျာများကို . အဆင်ပြေရာ ပြခန်းမှာ.. ထည့်ပြနေမှာဖြစ်ပါကြောင်း ။
အခုပို့ထားတဲ့ ကဗျာ ကိုတော့..
ပြခန်း ( ၄ ) လောက်မှာ မှ ထည့်ပြနိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းးး
နာ့ကချာလေးလည်း ပြခန်းထဲက အမှိုက်ခြင်းထဲလုံး ထည့်လိုက်ပြီထင်ပါရဲ့ ကချာကနေ အရှင်လတ်လတ် လုံးခြင်းဘ၀ရောက်ရပြီထင်တယ်နော် ဟုတ်ရား ဟင်
အဘနီ ရဲ့ ကဗျာလေး ကို သေသေချာချာ ကိုသိမ်းထားပါတယ်ဗျာ ။
ပြခန်းအမှတ် ( ၄ )မှာ.ထည့်သွင်းပြသပါမယ်.လို့ … ။
ပြခန်း အတွက် ပေးပို့ လာတဲ့ ကဗျာများက်ို…ရိုသေမြတ်နိုးစွာ.စုစည်း သိမ်းဆည်း..နေပါတယ်.လ.ို့ .
” ရွာ့ လူကြီးသူမ များဆီက..
ဟယ် ၊ မနောက်ပါနှင့်ကွယ် ။
အဘ နှင့် ၊ ကဗျာ နှင့်က ဝေးပါတယ်ကွယ် ။
အင်း ၊ အဘ ဆီက ကဗျာကိုမှ ထဲ့ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ၊
ဟိုတစ်ခါ မန့်ထားတဲ့ ကဗျာလေးပဲ ရှိတယ် ။ ဟဲ ဟဲ ။
ဖြစ်ချင်တိုင်းလဲ ၊ မဖြစ်ရပါ ။
ဟဲ ဟဲ ၊ အဘ လက်ရည်နှင့်ကတော့ ၊
ဒီ ကဗျာက လက်ကုန်ပဲ ၊ ဒီ့ထက် ပိုကောင်းတာ ထွက်လာဖို့ မရှိဘူး ။
မန့် တာတောင် ဒီလောက် ကဗျာဆန်နေမှတော့…
ကဗျာနဲ့မဝေးပါဘူးဂျာာာာ။
ဟင် ၊ အဲဒါ မန့် တာ မဟုတ်ဘူးလေ ၊
အဲဒါ က အဘ ရဲ့ ကဗျာ ပဲလေ ။
ဟဲ ဟဲ ၊ ဒါပဲ တတ်တယ် ။
အဘ မိန်းမ က ထမိန်ဝတ်ဖူးလေ။
ဗုတ်တွားတယ်ခည .. ရေးသူတော့မမှန်းတတ်လို့ မမှန်းတော့ပါဘူးခည..
ကဗျာပြခန်းအတွက် တန်းစီပြီးစောင့်နေတယ်ဆိုတာ ကတော့ ၀မ်းသာစရာပါဘဲ။
ရှေးကဗျာ တွေ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။
ကဗျာပြခန်းထဲမှာလည်း ရှေးကဗျာ တစ်ပုဒ်စီ ပြ နေတာ ဆိုတော့
အဆင်ပြေတာတွေ့ ရင် ပြခန်း အတွက် ပါ
ကဗျာပြခန်းရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ တစ်ရွာလုံး ကဗျာတွေ
ကျွန်တော်တောင်အစောကြီးပို့ ထားလို့ ပါခဲ့တာထင်တယ်နော်
ပြခန်း ကို အားပေး လို့ ကျေးဇူးပါပဲ နော်
နောက် လာမယ့်ပြခန်းတွေ ကိုလည်း
အ ရောက် လှမ်း လာပါဦး နော့။
ကဗျာတွေ ဖွေးဖွေးလှုပ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို ကျွန်တော်
အခုဆိုရင် ရွာက ကဗျာရွာ ဖြစ်နေတယ်။
ကဗျာတွေ ပန်းလို ပွင့်လာကြပြီ ။
ဖွေးဖွေးလှုပ် လို့ ပေါ့ဗျာ
ကဗျာဟာ ကျွန်တော်တို့ဂဇက် ရွာထဲကို
ဧရာဝတီလို စီးဆင်းနေပြီ ။
မေခနဲ့မလိခ ဆုံသလို ကဗျာ နဲ့ဂဇက် ရွာ ဆုံနေပြီ ။
ကျွန်တော် ဒီ အစ ဆွဲထုတ်ဖို့ ကြံတုန်းက
တွေး ထားတာထက် အဆများစွာ
ပိုပြီးး အောင်မြင်နေပါပြီ ။
အရမ်း ဝမ်းသာ မိပါတယ်။
အားပေးသူတွေ ကူညီ သူတွေ အားလုံးကိုလည်း
လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူး တင် မိပါတယ်။
ဘယ်တုန်း က နှလုံးသားကို စက် တပ်လိုက်တာဒုံးးးး
စက်တပ်ထားတဲ့နှလုံးသားတွေ အတွက်ပါ…ကဗျာ ရှိနေပါတယ် ။
အဟိ ။ ကြော်ငြာတာလေ.. ။
ခုနကဖုန်းဆက်လာတဲ့မမမွန်ရဲ့စကားကြောင့် အပြေးအလွှားလေးလာခဲ့ရဒယ် …
အဟိ .. အကုန်ဖတ်ပီးပြီကွ ..
သူလေး ရောက်လာပြီ ဂိုးးး
ကျွန်တော်က သိကြားမင်းကို တိုင် ဖို့ မလာတဲ့ သူ တွေ စာရင်း တောင်
လုပ်နေ ပြီ ။
ကဲ ပြခန်း ထဲ မပျက်မကွက် ဝင်ရောက် ခံစား သူ
အမာခံ ပလိတ်သက် အဖြစ် စာရင်း သွင်း လိုကိပါ ဘီ ။